Al-shabaab oo sheegatay weerarkii qarax ee galabta Muqdisho ka dhacay iyo khasaaraha oo sii kordhay. – Radio Daljir
Al-shabaab oo sheegatay weerarkii qarax ee galabta Muqdisho ka dhacay iyo khasaaraha oo sii kordhay.
Febraayo 8, 2012 12:00 b 0
Muqdisho, Feb 08 ? Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay mas?uuliyadda weerarkii is-maadaaminta ahaa ee galabta lala beegsaday maqaaxi laga cunteeyo oo ku taalla agagaarka hoteelka Muno ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir.
Mas?uuliyiin u hadlay ururkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in ay iyagu soo abaabuleen qaraxaasi, waxaana ay intaasi ku dareen in lala haleelay bar-tilmaameedkii loogu talo galay oo ahaa maqaaxidaasi cuunnada, taasoo Al-shabaab ay sheegeen in ay saldhig u ahayd sirdoonka dawladda iyo mudanayaasha baarlamaanka.
Al-shabaab, waxay qaraxaasi ku sheegeen in uu ahaa mid isla goobtaasi lagu diyaariyey, iyagoo meesha ka saaray in uu ahaa mid baabuur loo adeegsaday, warkaasoo saraakiil dawladda ahi ay horay u sheegeen.
Dhinaca kale waxaa aad u sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay qaraxaasi, waxaana warar aannu ka helnay ilo kala duwan oo dawladda iyo dadka shacabka ah iskuga jira ay tilmaamayaan dadka halkaasi ku dhintay in ay gaarayaan 17 ruux, halka dhaawucuna uu ka badan yahay 20 kale, kuwaasi oo labo ka mid ahi ay yihiin xildhibaanno baarlamaanka ka tirsan.
Saraakiil u hadlay dawladda federaalka, ayaa sheegay weerarkaasi in uu ahaa mid loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kaddibna lala eegtay maqaaxidaasi, iyagoo isla markiiba weerarkaasi ku eedeeyey Al-shabaab.
Goobta qaraxaasi ka dhacay waxaa ay aad ugu dhawdahay hotelka Muna ee magaalada Muqdisho, kaasoo ay deggan yihiin mudanayaal badan oo mid ah baarlamaanka federaalka iyo saraakiil dawladeed, waxaana hoteelkaasi weerar lagu qaaday sannadkii 2010-ka ku dhintay dad badan oo iskugu jiray dawladda iyo shacab, waxaana isla weerarkaasna sheegatay AL-shabaab.
11 qof oo ku dhimatay weerar is-miidaamin ah oo ka dhacay huteel Muna, Muqdisho.
Mogadishu,Feb 8 -Weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa galabta lala beegsaday goob maqaaxi ah oo u dhow hotelka Munna ee degmada Xamarwayne.
Taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir ee dowladda KMG ee Soomaaliya Axmed Xasan Maalin ayaa u sheegay warbaahinta, weerarkan inuu dhaliyay dhimashada 11 qof iyo dhaawaca dad ka badan 10 qof.
Dadka geeriyooday iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkan ayuu sheegay taliyaha inay dhamaantood ahaayeen dad rayid ah oo ku sugnaa goob lagu qaxweeyo oo u dhow hotelka Munna ee gobolka Banaadir.
Bishii Agoosto ee sanadkii 2010-kii ayay ahayd markii weerar hubaysan lagu qaaday hotelka Munna ee degmada Xamarwayne,kaasi oo dhimasho iyo dhaawac ay kasoo gaartay xildhibaano katirsanaa baarlamaanka Soomaaliya.
Xoghayaha Guud ee QM oo sheegay in dib loo bilaabayo hawlgalkii kormeerayaasha jaamacadda Carabta ee Suuriya.
Ciyaartii Sool v Sanaag oo 2 – 2 ku dhaamaatay & Sanaag oo rigoore ku soo baxday.